प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारलाई फोन गरेपछि… – Rapti Khabar
भदौ ११, काठमाडौँ । कुशे औंसीको भोलिपल्ट गत बिहीबार बिहान म अबेरसम्म सुतेको थिएँ।
बिहान ४ बजेसम्म काम गरेकोले निद्रा ढिलो खुलेको हुनुपर्छ। बिहान ९ बजेको हुँदो हो। मोबाइल बज्यो। नम्बर हेरें।
मोबाइलमा ट्रु कलर एप छ। एपमा फोन गर्नेको नाम केपी ओली देखियो। मैले कोही होला प्रधानमन्त्रीको नाम गरेको भन्ठानें। कानमा एअरफोन लगाइरहेको थिएँ, फोन उठाएँ। उताबाट आवाज आयो- गुल्मीको भण्डारीसँग इन्टरभ्यु गर्ने पत्रकार हो?
मैले हो सर भनें।
भण्डारीसँग तपाईंले कुराकानी गरेर प्रसारण गरेको भिडिओ छ नि त्यस्तो कुरालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। आर्मीको जागिर छाडेर गएर घरघडेरी बेचेर यस्तो बिरूवाहरू लगाउने अर्को पनि अर्को मान्छे भेट्टाएको छु मैले भन्ने खालको कुरा उताबाट आयो।
मैले ‘हजुर हजुर’ मात्रै भनिरहेँ।
श्रीखण्डलगायतको बिरूवा लगाएको काममा लागेका मानिसको कुरा उताबाट आएपछि मैले एक जना मोटा मानिसले पनि कृषि काम गरिरहेको भिडिओ बनाएको थिएँ भन्ने कुरा राखें। एक सय ६५ किलो मोटो मानिसले पनि कृषि कर्म गर्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो।
त्यसपछि दुबैतिरबाट आवाज आएन। शून्यता छायो। कोसँग कुरा गरिरहेको छु भन्ने मलाई थाहा नै थिएन। त्यही बेला मैले को बोल्नुभयो सर? भनेर सोधें।
उताबाट जवाफ आयो- म केपी शर्मा ओली बोलें, प्रधानमन्त्री।
प्रधानमन्त्री बोलेको भन्ने सुनेपछि म त जुरूक्कै उठें। के बोल्ने के नबोल्नेजस्तो भइगो। खङरङ्गै भएँ नि। त्यसदिन करिब ५ मिनेटजति प्रधानमन्त्रीज्युसँग मेरो कुराकानी भएको हो।
नेपाल आर्मीको जागिर छाडेर करिब ९३ लाखको घडेरी बेचेर बहुमूल्य जडिबुटी लगाएका गुल्मीका ३५ वर्षीय दीलिप भण्डारीको रिपोर्ट मेरो नेपाल अपडेट युट्युब च्यानलमा हेरेर प्रधानमन्त्रीले मलाई फोन गर्नुभएको रहेछ।
त्यो दिन त्यसै गयो।
भोलिपल्ट तीजको दिन पनि प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो। भण्डारीको फोन लागेन। उहाँसँग कुरा गराउनुस् भन्नुभयो। हामी टचमै बस्यौं। तपाईंको इन्टरभ्यूलाई मैले कसरी प्रचार गर्न सक्छु भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुभयो।
म गुल्मीमा २०७२ सालदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको छु। मैले नेपाल अपडेट अनलाइन र युट्युब च्यानल चलाएको छु। मेरो मोबाइलमा आएका कलको अटो रेकर्ड हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको फोनवार्ताको कुराकानी पनि रेकर्ड भएको रहेछ। मैले नै एक दुई जना साथीलाई यो सुनाएको थिएँ।
उनीहरूबाटै यो रेकर्ड सबैतिर फैलिएछ। प्रधानमन्त्रीले फोन गरेकोबारे मैले फेसबुकमा पनि स्टाटस राखेको छु। मलाई धेरैले बधाई दिइरहनुभएको छ। खुसी लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा पत्रकारलाई रिपोर्ट हेरेर फोन गरेपछि हौसला बढेको छ।